कार्यक्रम जुधेर अमेरिका जान पाइनँ–मेलिना राई, गायिका – Everest Times News
कार्यक्रम जुधेर अमेरिका जान पाइनँ–मेलिना राई, गायिका
‘कम्मर माथि पाटुकी, पटुकीमाथि घैला’, ‘शिरैमा शिरबन्दी’, ‘तिमीले बाटो फे¥यौ अरे’, फिमेल भर्सनजस्ता गीतबाट चर्चामा आएकी गायिका हुन् मेलिना राई ।
व्यवसायिक रुपमा गायन यात्रा सुरु गरेको ३ वर्ष पुग्दै गर्दा मेलिनाको स्वर धेरैले सुन्न पाएका छन् । फिल्म, कलेक्सन एल्बममासमेत स्वर दिएकी उनको सोलो एल्बम ‘बहार’ बजारमा रुचाइनेमध्येमा पर्छ ।
गीत रेकर्डिङ, स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त उनी पछिल्लो समय दोस्रो एल्बमको तयारीमा छिन् । मोरङ घर भएपनि मावली खर्साङमा जन्मिएकी उनी काठमाडौंमै हुर्किन् । १२ वर्षमै गीत गाएकी उनी २०६५ को आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएकी थिइन् । उनै गायिका मेलिना राईसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
तपाईंको सांगीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो, अहिलेसम्म यात्रा कस्तो भइरहेको छ ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि नै संगीतले भरिपूर्ण रहेको थियो । बुवा संगीतका गुरु, घरमै संगीत सिक्ने मौका पाएँ । उहाँको कडा अनुशासनमा संगीत सिकें । मलाई पनि यही क्षेत्रमा रमाउने मन थियो । १२ वर्षमै बुवाको संगीतमा ‘हिमालको काखमा यति सुन्दर देश’ बोलको गीत रेकर्ड गर्न पाएँ ।
व्यवसायिक रुपमा गायनमा लागेको ३ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा विभिन्न फिल्म, कलेक्सन एल्बममा गीत गाउने अवसर पाएँ । आफ्नै एल्बम ‘बहार’ पनि बजारमा ल्याए । १,५० जति गीत त गाइसकें । मेरो सपना, योजना सबै संगीत नै हो । यही क्षेत्रमा काम गर्न पाएकी छु । त्यसैले यो यात्रा रमाईलो छ । गीत रेकर्डदेखि हरेक पलमा रमाउने गरेकी छु ।
तपाईंका प्रायः गीतहरु श्रोतादर्शकले मनपराएका छन्, यो सफलताको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
मैले अहिलेसम्म गीत लेखेकी छैन । अरुकै गीत गाइरहेकी छु । जोजसले दिनु भएपनि मैले नाइँ पनि भनेकी छैन । सबैको गीत गाउदै आएकी छु । गीतहरु चर्चामा आउनु त टिमकै मेहेनत हो । त्यसैले टिमलाई नै मेहेनतको श्रेय जान्छ ।
देशविदेशका स्टेजहरुमा पुगिरहनुभएको छ, भ्याइनभ्याई हुनुहुन्छ ?
पेसा नै गायन भएकाले मेरो पहिलो प्रथामिकता गीत हो । गीत गाउन युरोप, युके, हङकङ गएपनि नेपालको कार्यक्रम छाडेकी छैन । पहिलो विदेश यात्रा युरोपबाट भएको हो । युरोपका पाँचवटा देशमा पुगेपछि युके पुगें । त्यसपछि कोरिया, हङकङ हुदैं इजरायल पुगें । प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरुको धेरै माया पाएँ ।
अमेरिकामा पनि तपाईंका श्रोताहरु हुनुहुन्छ, कहिले पुग्नुहुन्छ ?
दुई पटक अफर आइसकेको थियो । तर, कार्यक्रम जुधेकोले जान पाइनँ । कुराहरु आइरहेका छन् । सायद समयले साथ दिएमा चाँडै आइपुग्छु होला ।
भनेपछि अमेरिका तपाईंको प्राथमिकतामा परेन ?
मैले नेपालकै कार्यक्रमका लागि कन्ट्रयाक गरेकी थिएँ । त्यसैले आफ्नै देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिएँ । पहिले कन्ट्रयाक गरिसकेपछि अफर आएकोले अमेरिकाको कार्यक्रममा जान सकिनँ । मेरो पहिलो प्राथमिकता देशसँग होइन, कामसँग हो । आफुले वचन दिएपछि धोका दिन सक्दिनँ ।
तपाईंको पढाई समाजशास्त्र रहेछ, अंग्रेजी पनि पढ्नुभएको रहेछ, पढाइ र पेसा नमिल्दा कतिको चिन्ता लाग्छ ?
म प्रोफेसनल्ली सिंगर हुँ । पढाईंसँग पेसाको रिलेट हुनै पर्छ भन्ने छैन ।
बुवा संगीतका गुरू हुनुहुन्छ, अचेल पनि बुवाकै सहयोग लिनुहुन्छ ?
सुरुमा उहाँले नै सिकाउनु भएको हो । अहिले त म बुवाको सहयोग विनै गाउन सक्ने भएकी छु । उहाँको सल्लाह सुझाव भने माग्ने गर्छु ।
पछिल्लो योजना के छन् ?
अहिले दोस्रो एल्बमका तयारीमा जुटेकी छु । दसैं अघिसम्म त बजारमा आउछ होला ।